राष्ट्रपति भण्डारी किन जादैछिन् उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा ? कारण यस्तो छ ! - राष्ट्रपति भण्डारी किन जादैछिन् उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा ? कारण यस्तो छ !
राष्ट्रपति भण्डारी किन जादैछिन् उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा ? कारण यस्तो छ !
२०७6, २ बैशाख, 12:41:10 PM
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यहि वैशाख ११ गते उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा जाने भएकी छन्। भण्डारी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ‘बिआरआई’को दोस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बेइजिङ जान लागेकी हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण तयारी तीव्र पारेका छन्। यद्यपी उनको भ्रमणको आधिकारिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन।
बिआरआईको दोस्रो शिखर सम्मेलन अप्रिल २५ देखि बेइजिङमा हुँदैछ। चीनले एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई जल र जमिनबाट जोड्ने लक्ष्यसाथ ल्याएको बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी सियान हुँदै बेइजिङ पुग्ने कार्यक्रम छ। सियानमा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रान्तस्तरीय नेताहरूसँग छलफल गर्नेछन्। सियान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको जन्मस्थल पनि हो।
सियान भ्रमण सकेर राष्ट्रपति बेइजिङ जाने छन्। त्यहाँ उनी बिआरआईको दोस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्।बेइजिङमा रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सीसँग दुई पक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
दुई राष्ट्रपतिको भेटमा तीन वर्षअघि भएको नेपाल-चीन पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने निजी स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि गत भदौमा नेपाल र चीनले सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याएका थिए। उक्त प्रोटोकल अनुसार नेपालले चीनका ४ सामुद्रीक र ३ सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी सामान ल्याउने सक्नेछ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए। राष्ट्रपति भण्डारी अप्रिल २९ मा बेइजिङनजिकै सुरू हुने बागबनी प्रदर्शनीमा पनि सहभागी हुने तय भएको छ।
बेइजिङ भ्रमण सकेर राष्ट्रपति भण्डारी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत आउनेछन्। तिब्बत भ्रमण सकेर उनी वैशाख १९ गते स्वदेश पुग्ने कार्यक्रम छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको सन्देश उत्तर लैजान दक्षिण कोरिया प्रतिक्षारत
राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ [फोटोफिचर]
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण राजकीय हुने